Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » 60% dadka Mareykanka waxay dhahaan maaskaro ayaa halkaan jooga
Jebinta Wararka Safarka • Caafimaadka Warka • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Jamhuuriyeyaashu waxay inta badan horseedeen dacwadda ka dhanka ah waajibaadka maaskaro ee dib loo soo celiyay, in kasta oo codbixintu u muuqato inay muujineyso saami caddaalad ah oo taageero maaskaro ah labada dhinac ee dariiqa siyaasadeed, iyada oo in ka badan kala bar dadka Jamhuurigu ay sheegeen inay is -qarinayaan haddii ay jiran yihiin, halka 80 % Dimuqraadiyiintu sidaas oo kale ayay yiraahdeen.
67% dadka Mareykanka ah ayaa qorsheynaya adeegsiga maaskaro dadweynaha dhexdiisa haddii ay xanuun dareemaan.
Dad badan oo Mareykan ah ayaa doonaya inay sii wadaan ku tiirsanaanta waji-xidhka, xitaa adduunyada aafada ka dib.
In ka badan 40% dadka Mareykanka ah ayaa sheegaya inay xirayaan maaskaro “meelaha dadku ku badan yihiin” xitaa masiibada kadib.
Sida laga soo xigtay ra'yi ururin cusub oo ay samaysay Dugsiga Siyaasadda iyo Dawladda ee Schar ee Jaamacadda George Mason, Dad badan oo Mareykan ah ayaa doonaya inay sii wadaan ku tiirsanaanta maaskaro, xitaa adduunyada aafada ka dib.
In kasta oo maaskaro la cusboonaysiiyay ay waajibayso iyo hagid la cusboonaysiiyay oo ka socota Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) waxay heleen dhabar jab xoog leh oo ka imanaya kuwa dhaleeceeya, ra'yiururin cusub ayaa lagu ogaaday in saddex meelood laba meel dadka Mareykanka ah ay sii wadi doonaan duubista haddii ay dareemaan jirro, ka dib markii cudurka faafa ee coronavirus, iyo in ka badan 40% ay ku dabooli doonaan daboolka wejiga 'meelaha dadku ku badan yihiin' xitaa kadib COVID-19.
Sida laga soo xigtay ra'yiururinta, oo la sii daayay shalay, 67% dadka Mareykanka ayaa qorsheynaya adeegsiga maaskaro dadweynaha dhexdiisa haddii ay xanuun dareemaan. Bilowga masiibada gugii sanadkii hore, CDC hagitaankeedii asalka ahaa ee maaskaro wuxuu ahaa inaad xidhato mid kaliya haddii aad dareemayso astaamaha coronavirus. Waxay tan iyo markaas dib uga noqdeen hagitaankii maaskaro ee loogu talagalay dadka Mareykanka ah ee la tallaaley, waxayna markii dambe cusbooneysiiyeen hagida in la yiraahdo maaskaro ayaa loo baahan yahay, xitaa kuwa la tallaalay, waxay u maleeyaan inay yihiin aagagga halista badan.
In ka badan 30% jawaabeyaasha ayaa sheegay inay isqarin doonaan haddii ay jiran yihiin mar haddii waddanku uu ku dhacay masiibada. In ka badan 50% ayaa sidoo kale sheegay inaysan xirnaan doonin waji daboolida meelaha dadku ku badan yahay, wax saraakiisha caafimaadku ay mararka qaarkood ku taliyaan, gaar ahaan goobaha gudaha, iyadoo ay ugu wacan tahay kororka kiisaska ku baahsan dalka oo dhan iyo faafinta kala duwanaanshaha delta.
In ka badan 40%, si kastaba ha noqotee, waxay yiraahdaan waxay xirtaan maaskaro “meelaha dadku ku badan yahay” xitaa masiibada kadib.
Kala duwanaanshaha u dhexeeya kooxaha siyaasadeed ayaa muujiyey wax badan oo su’aal ah oo ku saabsan in nolosha jawaab -bixiyeyaasha “ay caadi ku soo laabatay” weli, iyada oo gobollo iyo goobo badan ay dib u rogeen xannibaado iyo furitaanka ganacsiga mar kale.
Kaliya 15% dadka isku tilmaamay Dimuqraadiga ayaa sheegay in noloshoodu "si buuxda ugu soo noqotay caadi," marka la barbar dhigo 48% dadka Jamhuuriga. In ka badan 40% dadka Dimuqraadiga ah waxay rumeysan yihiin in noloshooda ay gebi ahaanba ka gudbi doonto masiibada sanadka soo socda, halka 20% ay rumeysan yihiin in loo baahan yahay saddex bilood oo kaliya. Jamhuuriyeyaashu waxay u badan tahay, sida laga soo xigtay sahanka, inay ka soo qeybgaleen kulan gudaha ah oo dadku ku badan yihiin sannadka cusub marka loo eego kuwa Dimuqraadiga ah, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ahi ay weli ka baqayaan inay yaraadaan heerarka tallaalka iyo kala duwanaanshaha.
Ra'yiururinta waxaa lagu sameeyay 1,000 qof oo qaangaar ah waxayna leedahay khalad khalad ah oo lagu daray ama laga jaray 4%.
Saraakiisha caafimaadku waxay toddobaadyadii la soo dhaafay dhiirrigelinayeen tallaallada waxayna ka digayaan inay sii kordhayaan kiisaska cudurka coronavirus xilliga dayrta. Anthony Fauci, oo ah la -taliyaha caafimaadka ee Madaxweyne Joe Biden, ayaa ka digay toddobaadkan kaliya inuu rumeysan yahay in kiisaska coronavirus ay gaari karaan 200,000 maalintii.
Mareykanka wuxuu leeyahay celcelis guuritaan toddobo maalmood ah qiyaastii 90,000 xaaladood oo cusub toddobaadkan, sida laga soo xigtay xogta Jaamacadda Johns Hopkins, taas oo 30% ka sarreysa celceliskii toddobada maalmood ee hore.